Utywala Ink mveliso | Kwichina I-China Alcohol Ink Manufacturers, abaXhasi
Utywala i-Ink Set-i-25 ezigcwalise kakhulu ii-Inki ze-Alcohol-i-Acid-Simahla, eyomisa ngokukhawuleza kunye nee-Inks ezisisigxina ezinotywala- I-Ink engafaniyo yoTywala ye-Resin, i-Tumblers, i-Fluid Art Painting, i-Ceramic, i-Glass kunye ne-Metal
I-Inks zotywala-Into ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uqale
Sebenzisa ii-inki zotywala kunokuba yindlela emnandi yokusebenzisa imibala kunye nokwenza imvelaphi yokunyathela okanye yokwenza amakhadi. Unokusebenzisa ii-inki zotywala ekupeyinteni kunye nokongeza umbala kwiindawo ezahlukeneyo ezinjengeglasi kunye nesinyithi. Ukuqaqamba kombala kuthetha ukuba ibhotile encinci iya kuhamba indlela ende. I-inki yotywala ayina-asidi, ine-pigmented kakhulu, kunye nendawo yokumisa ngokukhawuleza ukuze isetyenziswe kwindawo engenahlwayi. Ukuxuba imibala kunokwenza isiphumo esidlamkileyo esinokubakho kwaye amathuba anokulinganiselwa kuphela kwinto ozimisele ukuyizama. Funda apha ngezantsi ukuze ufunde ukuba zeziphi izinto oza kuzidinga xa usenza ii-inki zotywala kunye nezinye iingcebiso eziluncedo ngokubhekisele kule mibala iphilayo kunye nabalamli.